Xog: Caawimaada la xidhiidha Aaska (Help paying for Funeral- In Somali) – Horn of Africa foundation
Xog: Caawimaada la xidhiidha Aaska (Help paying for Funeral- In Somali)
Ma ogtahay inay jiraan caawimaad la xidhiidha aaska. Waxa aan ku jirnaa xilli ay bateen duruufaha jira dhinac dhaqaale iyo caafimaadba. Taas oo sababi karta inaad la kulantid baahi la xidhiidha qof aad jeceshahay oo ehelkaaga ah, ama asxaabtaada ah oo raba in laga caawiyo aaska.
Hadaba adi kaligaa maaha, waxaa jira dhaqaale dowladu ugu talo gashay, dadka dan-yarta ah, in laga taakuleeyo aaska.
Dhaqaalahan waxaa heli kara qofkii qaata ama ay dowladu siiso deeq lagu kabayo dhaqaalihiisa.
Tusaale ahaan, hadaad qaadatid dhaqaalahan hoose ee lagaa kabo waa dalban kartaa:
Hadaad kamid tahay bulshada qaatada taakuladaas kore, waxaad xaq u yeelanaysaa in lagaa caawiyo dhaqaalaha aaska.
Dhaqaalahaas waxaa toos loogu shubaya shirkada u qaablisan adeega aaska (Tusaale ahaan masaajidka duugista marxuumka u qaabilsan). Sidoo kale , hadii aad jeebadaada ka bixisay, waxaad ku dalban kartaa mudo 6 bilood gudahood ah.
Yaa dalban kara, ama xidhiidhka qofka dalbanaya iyo Marxuumka/ Marxuumada ka dhaxeeya maxay yihiin:
qofka dalbanaya waa inuu noqdo qof kamida shaqsiyaadkan:
Lamaanaha marxuumka (Xaaskiisa) ama Lamaanaha Marxuumada (Ninkeeda)
Qaraabada u xigta marxuumka/marxuumada ama Saaxiibkood
ilmaha caloolkujirka ku saqiiray isaga oo 24 todobaad jiray waalidkiis
Waalidka, ilmaha saqiiray ee ka yar 16 sano, ama haduu jiray 20 sano balse uu ku jiray waxbarasho la aqoonsanyahay.
Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in si sharaf iyo karaamo leh loo aaso. Hadaba haday jiraan qof qoyskaaga ah ama qaraabadaa ah ama saaxiibka ah, oggow waxaa jira taakulo aad heli kartid oo aad xaq u leedahay.
Waxa Allaah mahadiis ah Bulshada Soomaaliyeed inay yihiin dad iskaalmeeya, oo is gacan qabta waqtiyada xaaladu adagtahay. Sidaas oo ay tahay waxa hadana wanaagsan in la helo xogta la xidhiidha caawimada laga heli karo dowlada.
Sida loo dalbankaraa
Waxaa u dhib yar inaad teleefan u dirtid: 0800 169 0140
Hadii aad u baahantahay xog dheeri ah, fadlan nagala soo xidhiidh telefanka cinwaankayaga:
ama email noogu soo dir info@hornofafricafoundation
fadlan xogtan waa mid isbadali karta masuulna kama nihin waxii ka qaldama.
waxaad faahfaahinta saxda ah ka heli kartaa cinwaankan hoose-